Doorashada gogosha carruurta ee qolka carruurta | Qurxin
Doorashada dharka xijaabka ee carruurta
Susy fontenla | | Dhameystirka, Qurxin, Qurxinta carruurta
Waqtiga dooro dharka qolka carruurta waxaan haysanaa fursado badan. Maanta waxaa jira dhar loogu talagalay iyaga, barkimooyin qaabab xiiso leh, dhar midab leh, qaabab qurux badan iyo fikrado kale oo badan. Mid ka mid ah dharka aan ka helno sariirtaada mid aad u kala duwan ayaa ah dharka carruurta.
Kuwaas gogosha carruurta waa la isticmaali karaa waqtiga nasashada mar walbana gacanta ayaa lagu hayaa. Waa inaan lagu jahwareerin duvet, oo qaada daboolka duvet. Gogosha maanta waa wax fudud oo waxaa loo isticmaalaa xilliyadaas aan qabow iyo kuleyl midna ahayn. Marka hadda waxaan raadin karnaa gogol loogu talagalay carruurta kufilan sariirtooda fursadaha badan ee naloo soo bandhigay.
1 Maxaa loo doortaa dharka carruurta
2 Xagee ka iibsan kartaa dharka dharka carruurta
3 Dharka carruurta ee midabada aasaasiga ah
4 Dharka carruurta oo la daabacay
5 Dharka xiisaha leh ee carruurta
6 Gogosha sariirrada
7 Sidee laysugu daraa dharka carruurta iyo qolka
Maxaa loo doortaa dharka carruurta
Waa run run in markii ay yimaadeen Waqooyiga Yurub iyo daboolkooda quruxda badan, dharka carruurta ay ku jiraan asalka. Ha isku khaldin labadooda, maadaama Nordicku u eg yahay gogol jilicsan, laakiin waxay leedahay daboollo laga saari karo. Xijaab maanta waa khafiifsan oo fududSidaa awgeed, waxay bedel weyn u noqon karaan daboolka daboolka diiran ee xilliga qaboobaha.
Faa'iidooyinka waaweyn ee xulashada dharka xarkaha carruurta ayaa ah inay iyagu yihiin gabal ku habboon nuska. Maalmahaas marka ay weli wax yar qabow tahay habeenkii, laakiin kuma filna in la isticmaalo Waqooyiga Yurub. Guga iyo xitaa xagaaga ayaa ah waqtiga ku habboon in la isticmaalo duvets. Xitaa waxay u adeegaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha, si ay u dhammaystiraan Waqooyiga Yurub haddii ay aad u qabow tahay. Marka la soo koobo, waa gabal dib loogu qiimeeyay qurxinta, oo aad u kala duwan.
Xagee ka iibsan kartaa dharka dharka carruurta
Dukaamada dharka lagu iibiyo ee carruurta ayaa leh dharka caruurtan, maadaama ay mar labaad ku soo noqonayaan isbeddel. Waa qaybo si fudud loo xidho, sidoo kale way fududahay in la maydho waxayna noo adeegaan sanadka oo dhan. Dukaammada sida Zara Home ee qaybta carruurtooda waxaa ku yaal soo jeedimo badan. Waxaan sidoo kale tagi karnaa dukaamo waaweyn ama waxaan leenahay dukaamo sida Ikea. Gudaha dukaamada internetka Waxaad ka heli kartaa qiimayaal aad u wanaagsan iyo moodallo badan iyo soo jeedimo sariiraha carruurta. Meelaha sida Amazon waxaa ku yaal huffooyin jaban iyo alaab-qeybiyeyaal badan oo kala duwan. Waa arrin raadinta meelo kala duwan oo laga iibsado, isbarbar dhiga qiimaha iyo waliba fikradaha isticmaaleyaasha kale, in kasta oo shirkadaha sida Zara Home aysan ku niyad jabin xagga tayada.
Dharka carruurta ee midabada aasaasiga ah
Haddii aan qurxineyno qolka carruurta, waxa ugu fudud ee kuwa aan dooneynin inay ku adkaadaan noloshooda gogosha waa dooro kuwa leh hooska aasaasiga ah. Xaaladdan oo kale waxaan aragnaa midab casaan ama miro guduud ah oo ku habboon bilaha xagaaga. Cod jilicsan oo isku daraya codad cad iyo rooga midabka leh. Waxa kale oo jira midabbo kale oo aynu ku khamaari karno sida cad, beige, cawl ama buluug buluug ah. Codka caadiga ah ee kiiskan sidoo kale wuu nooga fudud yahay haddii aan dooranno xijaabyo leh qaabab kala duwan.
Dharka carruurta oo la daabacay
Halkan waxaan horeyba u dooranayna wax ka sii adag oo aan isku darno, laakiin haddii aan jecel nahay saameynta waa in aynaan seegin. Waxaa jira daabacado badan oo la gashaday, laga bilaabo ubax ilaa dhibco polka ama xiddigaha iyo karbaashyo. Waxaa jira soo-jeedin aan dhammaad lahayn oo waxa wanaagsan maanta waa in isku-darka daabacadaha ay yihiin isbeddel. Taasi waa, waxaan ku biiri karnaa waraaqaha dhibcaha polka oo leh dhar gogol leh iyo dhinaca kale, iyada oo aan saameyn la yaab leh lahayn. Dabcan, waa inaad raadsataa codad si fiican isugu dhafan.
Dharka xiisaha leh ee carruurta
Haddii carruurtu yihiin taageerayaasha filim ama a dabeecad kartoon ah, hubaal inay jeclaan doonaan wax kasta oo xiriir la leh jilayaasha ay jecel yihiin. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira noocyo kala duwan oo lagu qurxiyo astaamaha sida halyeeyada barafoobay ama Disney ugu caansan. Way fududahay in laga helo dukaamada internetka, markaa haddii aan ogaanno in carruurtu ku faraxsan yihiin wax sidan oo kale ah, waxaan ka iibsan karnaa dharka carruurta oo leh astaamo.
Waxa kale oo jira kuwa yaryar xijaab sariirrada. Markay caruurtu sii weynaanayaan oo sariirta loo istcimaalo sariir, waxaa la joogaa waqtigii la isticmaali lahaa xijaabadan yar. Naqshadahoodu badanaa waa jilicsan yihiin, oo leh ubaxyo iyo codadkii hore, oo aad ugu habboon qurxinta qolalka carruurta. Iyagu waa kuwo aad wax ku ool u ah sariirradan oo waa la hagaajin karaa ama maahan.
Sidee laysugu daraa dharka carruurta iyo qolka
Mid ka mid ah dhibaatooyinka na soo food saara marka aan iibsanno dharka carruurta ayaa ah ogaanshaha ku dar iyaga qolka intiisa kale. Mararka qaar waxaan helnaa dukaamo ay jiraan waxyaabo kale oo u dhigma oo iib ah, sida roogagga ama daahyada. Si kastaba ha noqotee, haddii tani aysan ahayn kiiska, waxaan si fudud ugu qasbanaaneynaa inaan hoos u dhigno hooska dharka si aan ula jaanqaadno waxyaabahan kale. Iyo si loo fududeeyo, waxaa fiican in la doorto hooska aasaasiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Qurxinta » Qurxin » Doorashada dharka xijaabka ee carruurta
Sanduuqyada balaastigga ah ee aad ku keydin karto gurigaaga
Duvet wuxuu daboolaa sariirtaada